Tag: sary b2b
Isan-taona dia toa mitombo ny habetsaky ny vola ampanjifaina amin'ny paikadim-barotra amin'ny atiny. Manokana, ny mpivarotra atiny B2B dia mikatsaka ny hahazo fahatsiarovan-doko, fitarihana taranaka, fahazoana mpanjifa sy tsy fivadihana, fifamoivoizana an-tranonkala ary fivarotana amin'ny alàlan'ny famoronana atiny. Rehefa matsilo ny mpivarotra amin'ny paikady ampiasainy hizarana ny atiny, izay tetika, sehatra ary fironana iza no mahazo tombony lehibe indrindra? LinkedIn dia miara-miasa amin'ny MarketingProfs sy ny Content Marketing Institute mankany
Alahady Oktobra 21, 2012 Sabotsy, Oktobra 20, 2012 Douglas Karr
Paikady mahafinaritra ny orinasa amin'ny orinasa (B2B) amin'ny famoronana atiny. Ny fampivelarana, ny fizarana ary ny fampiroboroboana ny atiny an-tserasera dia afaka mampitombo ny fahefanao sy manorina fifandraisana amin'ireo mpanjifanao ho avy. Unbounce - sehatra fananganana pejy fanaovana azy manokana - dia namolavola ity sary ity, The B2B Lead Generation Manifesto hamaritana ny fizotry ny fahombiazan'ny taranaka fitarihana B2B amin'ny alàlan'ny marketing amin'ny atiny. Ny infographic dia manome ny statistika mifandraika izay manohana ny famoronana atiny amin'ny alàlan'ny fitorahana bilaogy sy fanoratana ebook, lead